Nanị anọ kaadị Exchanges irube isi chọrọ nke South Korean regulator - Blockchain News
ke mbubreyo January, ọ bịara mara banyere ukara ban site South Korean ọchịchị nke amaghị aha azụmahịa na cryptocurrencies, nke banyere n'ime ike na January 30. Dị na chọrọ nke Financial Services Commission of South Korea (FSC), isii akụ ekwele nkwa ka ihe akụrụngwa maka eke akaụntụ ezigbo aha. Otú ọ dị, dị ka ọ tụgharịa si mesịrị, mmiri na-achọrọ iji nye ọhụrụ ọrụ ahịa nke Cryptocurrency Exchanges.
“Ihe e kere eke nke ọhụrụ akaụntụ kenyere a mgbanwe ego bụ a afọ ofufo mkpebi nke ụlọ akụ,” a ichekwa ego na bank ụlọ ọrụ ukara gwara South Korean mbipụta Yonhap. ọ na-akọwa: “Banks nwere ọrụ iwu iji gbochie ego Laundering na-enyocha naanị site esịtidem usoro: nkwenye nke ndị ahịa si kaadị mgbanwe, kwụsie ike nke usoro, nchedo nke ọrụ ozi na nnabata na-emegide ego Laundering norms.”
Nke isii mmiri e kwuru na mbụ, naanị atọ – Shinhan Bank, Nonghyup Bank na Industrial Bank of Korea – enye ndekọ ahịa nke kaadị Exchanges. Na nanị anọ nke 25 South Korean mgbanwe ego mgbanwe gbanwere amaghị aha ndekọ akụkọ ezigbo aha. N'ihi ya, ọhụrụ omebe iwu chọrọ ederịta akwụkwọ ozi Bithumb, Upbit, Coinone na Korbit.
Dị ka Asia Economic, Shinhan Bank, nke na-eje ozi Bithumb, kpebikwara nwa oge ewepu mgbanwe site na usoro nke na-eke akaụntụ ezigbo aha. The nnọchiteanya nke ụlọ akụ ahụ kọwara na ụfọdụ e weere na njikọ na eziokwu na “mgbanwe a na-enyocha ndị uwe ojii” na ikpe nke ikpeazụ afọ ohi.
Obere na-ajụ-sized mgbanwe na-enye ụlọọrụ akaụntụ, kama virtual ndị, mezie ndị ọzọ chọrọ. Dị ka Yonhap akwụkwọ, ugbu a, na ojiji nke ụlọ ọrụ akaụntụ na-ekwe bụrụhaala na mgbanwe nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-akwado ha ibu ọrụ iji gbochie ego Laundering, nakwa dị ka iji gosi njirimara nke ndị ahịa. Na mgbakwunye, ha ga-akwagide “mmezi ndenye ego site mmiri na ego ọchịchị.” Otú ọ dị, ọtụtụ mgbanwe anataghị nkwenye nke ọhụrụ akaụntụ na gwara Yonhap akuko na ha ga-kwụsịtụ azụmahịa ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ agbanweghị. Dị ka Korean Blockchain Association, banyere 787,600 ahịa na-eji ọrụ nke ndị dị otú ahụ mgbanwe, onye akụ nwere ugbu a na Limbo.
Mercedes na-akwadebe kaadị Mkpụrụ ego ka ụgwọ Eco-Driving
Daimler, ndị German ...
Previous Post:Coinbase amalite ikpeazụ ule nke Segwit
Next Post:Ọ bụghị ihe niile miners ga-alanahụ eri Mbelata bitcoin
Ka 11, 2018 na 6:41 AM